"Aniga Ayaa Ka Wanaagsan Messi Iyo Ronaldo..." - Kylian Mbappe Oo Qiso Layaable Soo Bandhigay | Laacibnet.net
HomeWararka Champions League“Aniga Ayaa Ka Wanaagsan Messi Iyo Ronaldo…” – Kylian Mbappe Oo Qiso Layaable Soo Bandhigay
“Aniga Ayaa Ka Wanaagsan Messi Iyo Ronaldo…” – Kylian Mbappe Oo Qiso Layaable Soo Bandhigay
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta PSG ee Kylian Mbappe ayaa amaan iskal daalay, waxaanu bannaanka keenay waxyaabaha uu naftiisa ku dhiirigeliyo si uu horumarka cikyaareed usii wado.
Laacibkan oo isagoo da’yar ku guuleystay Koobka Adduunka iyo koobab badan oo maxalli ah oo gudaha Faransiiska ah ayaa kaliya uu ka maqan yahay tartanka Champions League oo uu xilli ciyaareedkii hore finalka keenay kooxdiisa.
Kylian Mbappe ayaa shaaciyey in naftiisa uu u sheego inuu yahay ciyaartoy ka wanaagsan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ka hor inta aanay bilaabmin ciyaaruhu, si uu kalsooni isku geliyo.
22 jirkan oo lala xidhiidhinayo kooxaha Real Madrid iyo PSG, xilli uu dhamaanayo qandaraaskiisa ayaa yidhi: “Is-dhiirigelintu waa muhiim sababtoo ah marka aad ku jirto waqti adag, ma jiro qof kale oo ku riixaya, waana in aad ku qanciso naftaada in aad ka gudbayso buuraha.
“Dadku ma fahamsana is-dhiirigelinta laakiin marka aanad xaalad fiican ku sugnayn ma jirayo qof kuugu imanaya guriga oo kuu sheegaya waxa aad qaban karayso. Waa adiga kalidaa iyo maskaxdaada, markaa waa in aad ku qanciso naftaada in waxyaabo wanaagsan aad samayn karayo.”
Kylian Mbappe oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Mar kasta oo aan garoonka gelayo, waxaan u sheegaa naftayda in aan ahay ciyaartoyga ugu wanaagsan oo aan xataa ka fiicanahay Messi iyo Cristiano Ronaldo. Run ahaantii way iga fiican yihiin, waxaanay sameeyeen in ka badan malaayiin waxyaabood oo aanan anigu samayn. Laakiin waa in aan u sheego naftayda in aan ka wanaagsanahay iyaga sababtoo ah marka aad sidaas samayso ma arkaysid wax ku xakameeya, waxaanad isku dayaysaa in aad sida ugu fiican u ciyaarto.”
Si kastaba, Kylian Mbappe ayaa xilli ciyaareedkani u yahay mid wanaagsan, waxaana 36 kulan oo uu saftay uu dhaliyey 30 gool, iyadoo kooxdiisuna ay usoo gudubtay wareegga siddeedda Champions League oo ay la ciyaari doonaan Bayern Munich.